श्री स्वस्थानी व्रत कथा –माघ स्नान आज समाप्ति – bampijhyala.com
Home > कला/ साहित्य > भाषा/ संस्कृती > श्री स्वस्थानी व्रत कथा –माघ स्नान आज समाप्ति
पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनबाट शुरु भएको श्रीस्वस्थानी माताको महिमा वर्णन गर्ने कथाहरुको वाचन आजबाट समापन हुँदैछ । आजबाट श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको पुस्तक वर्ष दिनभर थन्क्याइन्छ । परमेश्वरीको कृपाले उक्त स्वस्थानी ब्रत कथाको पुस्तक फेरि नखोलुन्जेलसम्म हरेक नेपाली दलिन अनि बलेसीहरुमा शुभ समाचार अनि प्रेरणादायी वाणीहरु छेलोखेलो होस् । यसवर्ष श्रीस्वस्थानी कथाका अध्यायहरुमा हामीलाई सतीदेवीको बलिदानदेखि गोमा ब्राह्मणीको दुःख अनि दक्ष प्रजापतीको दम्भको अन्त्य लगायत पृथ्वीको श्रृष्टि जस्ता ज्ञान अनि प्रेरणा दिँदै बित्यो भन्ने आशा छ ।
संस्कृत शब्द श्रीस्वस्थानीको सरल नेपाली अर्थ भने आफू बसेको स्थानकी देवी भन्ने हो ।
‘स्वस्थानीको चार हातमध्ये पहिलो हातमा नीलकमल, दोस्रो हातमा खड्ग, तेस्रो हातमा ढाल र चौथो हातमा वरदमुद्रा लिएकी देवी श्रीस्वस्थानी हुन् भनी पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । जाने पुस्ताले आउने पुस्ताका लागि छाडेर जाने मुख्य कुराहरुमा संस्कार अनि परम्परा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरो हो । नेपाली सन्ततीहरुमा यस्ता संस्कार अनि परम्पराको ठूलो मूल्य अनि महत्व छ ।
यस्तै एउटा शदियौं पुरानो संस्कार हो, श्रीस्वस्थानी माताको व्रत कथा श्रवण । अनेकन किसिमका दस्तावेज अनि लेखहरुमा स्वस्थानी व्रतकथालाई महिलाहरुले मात्र गर्ने कठिन व्रतका रुपमा चित्रण गरिएतापनि श्रीस्वस्थानीको व्रत अनि महिमा पुरुषहरुले पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत अनि आराधना महिला–पुरुष दुबैले गर्ने अनि शुभ फल प्राप्त गर्ने जनविश्वास र जनउक्ति छ । यो व्रत बस्नाले शान्ति, सुख, समृद्धि अनि अध्यात्मिक चेतनामा वृद्धि भई सुस्वास्थ्य कायम रहने जनविश्वास छ ।
आधुनिक आणविक खोज÷अन्वेषण भइरहेको संसारमा सनातन संस्कारको हजारौ वर्ष अगाडि लेखिएको यही श्रीस्वस्थानी महिमा अध्यायहरुमै संसारको उत्पत्ति अनि कणहरु अर्थात् अणु अनि परमाणुहरुको कहीँ कतै ब्याख्या गरिएको पाइन्छ । श्रीस्वस्थानी व्रतकथामा महादेवको सतीदेवीप्रतिको आशक्तिले महिला र पुरुषको अन्र्तसम्बन्ध देखाउँछ भने गोमा ब्राह्मणीकै धैर्यताले हामीलाई दुःखमा नडगमगाउन पे्ररित गर्छ ।
हिँउदको जाडोमा न्यानो हुँदै परिवारका सदस्यहरु एकै ठाउँमा भेला भई बडो श्रद्धापूर्वक यी कथाका अध्यायहरु वाचन गरिन्छ । पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन शुरु हुने यो व्रतकथाका ३१ अध्यायहरु माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन समापन गरिन्छ । उपनयतु मंगलम् मन्त्रबाट शुरु हुने यो कथाको स्तुतिमन्त्र समापनमा यं व्रह्मा मन्त्रका साथै समापन हुन्छ ।
यस्ता साङ्गेमा छरछिमेक अनि आफन्त बोलाएर शाहाकारी भोजन गराउने अनि कन्या केटीहरुलाई टीका लगाएर दक्षिणा दिने पनि चलन छ । समापनका अवसरमा धेरै ठाउँमा मेला लाग्छ । व्रतालुको घरमा विशेष पूजा अर्चना गरिँदै रातभरि जाग्राम बस्ने चलन पनि छ । किशोर–किशोरीको उपस्थिति धेरै रहने यस्ता जाग्राममा भजन कीर्तन गाउने, नृत्य देखाउने र अन्य रमाइला सामाजिक क्रियाकलापहरु पनि हुन्छन् । यसरी सामूहिक रुपमै श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथा साङ्गे आयोजना गर्दा सम्पूर्ण समुदायलाई नै फाइदा हुने जनविश्वास छ ।
ऐतिहासिक शहर दोलखामा माधवनारायण भजन, सहधारा जात्रा र श्री स्वस्थानी ब्रतकथा समापन
यसै गरी दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा नं. २ स्थित दोलखा शहरमा पनी पौष शुल्क पुर्णीमा देखि शुरु भएको माधवनारायण भजन आजदेखि यस वर्षको लागि समापन हुदैछ । विहान विहान दोलखा शहर गणेश टोल तिनधारा राईतीबाट शुरु गरिने माधवनारायण भजनगान प्रख्यात भीमेश्वर मन्दिरमा पुगी समापन गर्ने चलन रहेको छ । यसरी एकमहीनासम्म माधवनारायण भजनगान आज देखि सहधारा धाराकाका साथ समापन गरिन्दैछ । सहधारा जात्रा भीमेश्वर नगपालीका वडा नं. २ बनारसी तिर्थस्थलबाट शुरुभई नगरपरिक्रमा गरी माधवनारायणको भजन र सहधारा जात्रा संगै समापन गर्ने चलन रहेको छ भनी भीमेश्वर नगरपालीका वडा नं. २ वडाध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।
पौष शुल्क पुर्णीमादेखि शुरु गरिएको श्री स्वस्थानीको ब्रतकथाको समापन पनी आजैदेखि यसपालीको लागि समापन गर्ने चलन रहेको भनाई वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
चिसापानी बजार र कर्णाली पुल आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:५०
माधवमणि मणि नै हुन् १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:५०
‘हेर्देउ न मायाले’ भन्दै रजनीको पछि लागे विल्सन १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:५०
वैशाख ११ गते धरहरा टावरको उद्घाटन १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:५०
नयाँ वर्षको अवसर संगै दार्चुलामा सिस्नु लगाउँर्दै बिसु पर्व धुमधामसँग मनाइँदै १५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १०:५०